Isizinda Sokwakha - Abakhiqizi baseChina nabaphakeli
Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziswa kakhulu ezimbonini zejusi neziphuzo ukukhipha izithako ezisebenzayo njenge-pectin nezitshalo zombala. Ukudlidliza kwe-Ultrasonic kungadabula izindonga zamaseli ezitshalo, kuvumela i-pectin, izimila zezitshalo nezinye izingxenye ukuthi zigeleze ziye kujusi. Ngasikhathi sinye, i-ultrasound iyaqhubeka nokusebenza ukusabalalisa i-pectin nokutshala izinhlayiya zombala zibe ezincane. Lezi zinhlayiya ezincane zingasatshalaliswa ngokulinganayo nangokuzinza phakathi kujusi. I-stabi ...
umshini wokukhipha we-ultrasonic wokukhipha uwoyela obalulekile
Ama-ultrasonic extractors abizwa nangokuthi ama-emulsifiers e-ultrasonic, ayingxenye yegagasi elisha lesayensi yesizinda. Le ndlela entsha ibiza kancane kunamanye ubuchwepheshe obuthuthukile emakethe. Lokhu kuvule inkundla yokudlala yemisebenzi emincane naphakathi ukwenza ngcono kakhulu izinqubo zabo zokukhipha. Isizinda se-Ultrasonic sikhuluma ngeqiniso eliyinkinga kakhulu lokuthi ama-cannabinoids, njenge-THC ne-CBD, yi-hydrophobic ngokwemvelo. Ngaphandle kwe-solvent nokhahlo ...
Imishini yokukhipha uwoyela ebalulekile esebenza kahle kakhulu
Ama-cannabis extracts (i-CBD, iTHC) angama-molecule we-hydrophobic (hhayi ancibilikayo emanzini) .Ngaphandle kwezixazululo ezicasulayo, kuvame ukuba nzima ukukhipha ama-cannabinoids ayigugu ngaphakathi kweseli. Ubuchwepheshe besizinda se-Ultrasonic buyixazulula ngempumelelo le nkinga. Isizinda se-Ultrasonic sincike ekudlidlizeni kwe-ultrasonic. Uphenyo lwe-ultrasonic olufakwe kulolo ketshezi lukhiqiza izigidi zamabhamuza amancane ngesilinganiso sezikhathi ezingama-20 000 ngomzuzwana. La magwebu abese ephuma, abangele ukuthi udonga lweseli oluvikelayo luqhume ngokuphelele ...
izithelo zemifino ye-ultrasonic izitshalo uhlelo lokukhipha
Imifino, izithelo nezinye izitshalo ziqukethe izithako eziningi ezisebenzayo ezinenzuzo, njenge-VC, VE, VB njalonjalo. Ukuthola lezi zithako, kufanele kuphulwe izindonga zeseli. Isizinda se-Ultrasonic sikhombise ukuthi siyindlela ephumelela kunazo zonke.Ukudlidlizela okusheshayo kweprosesa le-ultrasonic kuketshezi kukhiqiza ama-micro-jets anamandla, aqhubeka eshaya udonga lweseli lesitshalo ukulugqashula, kuyilapho okubhalwe odongeni lweseli kuphuma. Ukwakhiwa kwemishini eyinhloko Isizinda semisebenzi eminingi ...
Imishini yokukhipha i-Laboratory ultrasonic CBD
I-Laboratory ultrasonic imishini yokukhipha i-CBD ingahlola isilinganiso sokukhishwa nesikhathi sokukhishwa kwe-CBD kuma-solvents ahlukene, inganikeza amakhasimende imininingwane ehlukahlukene ngesikhathi esifushane, futhi abeke isisekelo samakhasimende ukwandisa umkhiqizo.
Imishini yokukhipha uwoyela ye-CBD
Amandla we-shear aqinile akhiqizwe yi-ultrasonic cavitation angena kumaseli ezitshalo, adudule i-solvent eluhlaza kumaseli ukumunca nokukhishwa kwe-CBD
Imishini yokukhipha imifino ye-Ultrasonic
Ucwaningo lukhombisile ukuthi izinhlanganisela zamakhambi kumele zibe ngendlela yama-molecule ukuze amunceke kumaseli omuntu. Ukudlidlizela okusheshayo kwephenyo ye-ultrasonic kuketshezi kukhiqiza ama-micro-jets anamandla, aqhubeka ngokushaya udonga lweseli lesitshalo ukulugqashula, kuyilapho okusodongeni lweseli kuphuma kuphuma. Isizinda se-Ultrasonic sezinto zamangqamuzana singalethwa emzimbeni womuntu ngezindlela ezahlukahlukene, njengokumiswa, ama-liposomes, ama-emulsions, okhilimu, ama-lotion, ama-gel, amaphilisi, ama-capsule, izimpushana, ama-granules ...
i-ultrasonic Cannabidiol (CBD) imishini yokukhipha i-hemp
Isizinda se-Ultrasonic singakhetha izixazululi ezahlukahlukene ngokuya ngokusetshenziswa okulandelayo kwe-CBD, okuthuthukisa kakhulu isilinganiso sokukhishwa, kunciphise isikhathi sokukhipha, futhi ibone isizinda esinobungani futhi esisebenza kahle.